ကမ္ဘာ့အသန်မာဆုံး ကလေး ( ၅ ) ဦး - 9Style
C.J. Senter ဟာ အသက္ ၁၀ ႏွစ္သာရွိ​ေလ့်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းဂု႐ုအျဖစ္ခ်ီးက်ဴးခံခဲ့ရပါတယ္။​ေေက်င့္ခန္း အရမ္းလုပ္တဲ့ လူငယ္အျဖစ္ လူသိမ်ားၿပီး လူတိုင္းအားက်ရတဲ့ six packs ကိုရွိၿပီးသူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ six packs ရရွိဖို႔အတြက္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို social media ေပၚမွာဖန္တီးခဲ့ပါတယ္။
ပရိတ်သတ်ကြီးကို ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ ကမ္ဘာ့အသက်အငယ်ဆုံး သန်မာတဲ့ ကလေး (၅) ယောက်ကိုဖော်ပြပေးမှာပဲဖစ်ပါတယ်။ သူတို့ထဲက အများစုကတော့ အလယ်တန်းပညာရေးကိုတောင်မစတင်ရသေးပါဘူး။ ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း သူတို့ကိုကြည့်ပီး အားကျလို့ရအောင် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
C.J. Senter ဟာ အသက် ၁၀ နှစ်သာရှိလေ့ျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဂုရုအဖြစ်ချီးကျူးခံခဲ့ရပါတယ်။ေကျေင့်ခန်း အရမ်းလုပ်တဲ့ လူငယ်အဖြစ် လူသိများပြီး လူတိုင်းအားကျရတဲ့ six packs ကိုရှိပြီးသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ six packs ရရှိဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းများကို social media ပေါ်မှာဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။
Yang Jinlong သည်တရုတ်ပြည်အရှေ့ပိုင်းမှမွေးဖွားလာသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာ သူဟာအသက် ၁၅ နှစ်သာရှိပါသေးတယ်။၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်သူအသက် ၇ နှစ်သာရှိသေးသည့်အချိန်တွင်ကားတစ်စီးကိုကားတစ်စီးဆွဲထုတ်နိုင်စွမ်းကိုသရုပ်ပြသဖြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင် သူ၏ကြွက်သားစွမ်းရည်အကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
ဂျူလီယာဗင်းစ်ဟာလက်ရှိမှာ အသက် ၂၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော်လည်းဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်သူမနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ Russian power lifter တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သူမဟာ လှပလွန်းတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ကြီးမားတဲ့ muscles တွေကြောင့် ” Muscle Barbie ” အဖြစ်လူသိများပါတယ်။
၁၃ နှစ်အရွယ်ရုရှားအငယ်တန်းကျွမ်းဘားနှင့်ကာယလေ့ကျင့်သူ Andrey Kostash သည်ကိုယ်အလေးချိန်သင်တန်းတက်နေသည်မှာကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ခြင်းသာမက Kotash သည်ကိုယ်ခံပညာအပါအဝင်အခြားသောအားကစားအမျိုးမျိုးနှင့်လည်းရင်းနှီးပါတယ်။ သူ့ရဲ့မိဘများဟာဆိုရင်အားကစား၌
ယခုအသက် ၂၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော Varvara Akulova ဟာဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင် ‘ကမ္ဘာပေါ်တွင်အင်အားအကောင်းဆုံးမိန်းကလေး’ အဖြစ်ချီးကျူးခံခဲ့ရပါတယ်။ သူမရဲ့မိဘများကဆပ်ကပ်ဖျော်ဖြေသူများဖြစ်ကြကပြီး အတူတကွဖျော်ဖြေတင်ဆက်ကြပါတယ်။ Varvara Akulova ဟာ power lifting feats အတွက် ကမ္ဘာ့ဂင်းနစ်စံချိန်စာအုပ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းတွင်သူမအသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကသူမ၏ကိုယ်အလေးချိန်ထက် ၄ ဆကျော်ပိုသောကီလိုဂရမ် ၃၀၀ (ကျောက်တုံး ၄၈) မ တင်ခြင်းပါဝင်ပါတယ်။
ဘုရားရှိခိုး မပျင်းပါနဲ့ (ဘုရားရှိခိုး ပူဇော်ရသော အကျိုး ရှစ်မျိုး )..